इतिहास खोतल्दा : १५ औँं शताब्दीतिर पोखरा कस्तो थियो ? हेर्नुस - Birgunj Sanjalइतिहास खोतल्दा : १५ औँं शताब्दीतिर पोखरा कस्तो थियो ? हेर्नुस - Birgunj Sanjalइतिहास खोतल्दा : १५ औँं शताब्दीतिर पोखरा कस्तो थियो ? हेर्नुस - Birgunj Sanjal
इतिहास खोतल्दा : १५ औँं शताब्दीतिर पोखरा कस्तो थियो ? हेर्नुस
१६ आश्विन २०७६, बिहीबार २३:३७
पोखरा / इतिहास खोतल्दा विक्रम संवत्को १५ औँं शताब्दीतिर कास्कीकोटका राजा कुलमण्डन शाहले पोखरा उपत्यकाका ठाउँठाउँमा गाई पालेका थिए ।
कक्षभित्र ४० देखि ६० वर्षसम्म पुराना पोखराका फोटा तथा डकुमेन्ट्री अवलोकन गर्न सकिने कोषका सदस्य नवीन उलकले जानकारी दिनुभयो । “पोखराको विगत जान्न चाहनेका लागि तस्वीर साक्षी प्रमाण हुन्,” उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन पोखराको वास्तविकता, जीवनका भोगाइ जस्ता धेरै कुरा तस्वीरले बोलेका छन् ।” (रासस